သင်္ကြန်မှာ ဘယ်မှမသွားတဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး သင်္ကြန်သီချင်းလေးနဲ့ လိုင်းပေါ်ကနေ အပျင်းပြေစေရန်နဲ့ သတိရနေကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နီနီခင်ဇော်ရဲ့ဗီဒီယို – Nyi Ma Lay
သင်္ကြန်မှာ ဘယ်မှမသွားတဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး သင်္ကြန်သီချင်းလေးနဲ့ လိုင်းပေါ်ကနေ အပျင်းပြေစေရန်နဲ့ သတိရနေကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နီနီခင်ဇော်ရဲ့ဗီဒီယို
By Ko AyePosted on April 13, 2022
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ…. အသံပါဝါ အရမ်းကောင်းတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သလို ဆရာဝန်မလေး တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ နီနီခင်ဇော် ကတော့ လက်ရှိ တိုင်းပြည် မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေစဉ် အချိန်မှာ CDMမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်တွေနဲ့ အတူတူ ပရဟိတ ဆေးခန်းလေး ဖွင့်လှစ်ပြီး​ ဆေးအကူဆရာဝန် တစ်ယောက် အဖြစ် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီပေး နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်လို့ တရားဝင် ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင် မရရှိတဲ့ နီနီခင်ဇော်က​ ဆေးအကူအဖြစ်ပဲ သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်တွေကို ကူညီ ပေးနေတာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်။
ဒီကနေ့ မှာဆိုရင် လည်း နီနီခင်ဇော်က သင်္ကြန်ရက် အတွင်း ဘယ်မှ မသွားပဲ အိမ်ထဲမှာ နေရင်း သီချင်းလေး ညည်းကာ သင်္ကြန်အချိန်အခါ သမယ လေးကို ဖြတ်သန်း နေကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောပြ လာခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်.။။ နီနီက”မဆုံဖြစ်တာ ၃ နှစ်ကြာပီ ဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန် 😔အခုလဲ အိမ်မှာပဲ သင်္ကြန်သီချင်းလေးတွေ တီးတိုး ရွတ်ဆိုရင်း လွမ်းဆွတ် သတိရနေ ပါကြောင်း ချစ်ပရိသတ်များ အားလုံး နှစ်သစ်မှာ ဘေးရန် ကင်းကွာ ကျန်းမာ ကြပါစေ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻” ဆိုပြီးဆုမွန်ကောင်း တောင်းရင်း အိမ်မက် စေတမာန်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ဆိုပြ လာခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်နော်။
အိမ်ထဲမှာ နေရင်း သင်္ကြန်အချိန်အခါကို ဖြတ်သန်း နေတဲ့ နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို အခုလိုပဲ တစ်ဆင့် ကူးယူ တင်ဆက် ပေးလိုက် ပါတယ်နော်။ ချစ်တဲ့စာဖတ် ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သင်္ကြန်အချိန်အခါလေး ကို အိမ်ထဲမှာ နေရင်း ဖြတ်သန်း နေကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည့် ပါတယ်နော်။
ပရိတ္သတ္ ႀကီးေရ…. အသံပါဝါ အရမ္းေကာင္းတဲ့ အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သလို ဆရာဝန္မေလး တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တဲ့ နီနီခင္ေဇာ္ ကေတာ့ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနစဥ္ အခ်ိန္မွာ CDMမွာ ပါဝင္ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ အတူတူ ပရဟိတ ေဆးခန္းေလး ဖြင့္လွစ္ၿပီး​ ေဆးအကူဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ကူညီေပး ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာအလုပ္ေတြ လုပ္လို႔ တရားဝင္ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ မရရွိတဲ့ နီနီခင္ေဇာ္က​ ေဆးအကူအျဖစ္ပဲ သူငယ္ခ်င္း ဆရာဝန္ေတြကို ကူညီ ေပးေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္။
ဒီကေန႔ မွာဆိုရင္ လည္း နီနီခင္ေဇာ္က သၾကၤန္ရက္ အတြင္း ဘယ္မွ မသြားပဲ အိမ္ထဲမွာ ေနရင္း သီခ်င္းေလး ညည္းကာ သၾကၤန္အခ်ိန္အခါ သမယ ေလးကို ျဖတ္သန္း ေနေၾကာင္းကို အခုလိုပဲ ေျပာၿပ လာခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။။ နီနီက”မဆုံျဖစ္တာ ၃ ႏွစ္ၾကာပီ ျဖစ္တဲ့ သၾကၤန္ 😔အခုလဲ အိမ္မွာပဲ သၾကၤန္သီခ်င္းေလးေတြ တီးတိုး ရြတ္ဆိုရင္း လြမ္းဆြတ္ သတိရေန ပါေၾကာင္း ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အားလုံး ႏွစ္သစ္မွာ ေဘးရန္ ကင္းကြာ က်န္းမာ ၾကပါေစ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻” ဆိုၿပီးဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း အိမ္မက္ ေစတမာန္ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးကို ဆိုၿပ လာခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္။
အိမ္ထဲမွာ ေနရင္း သၾကၤန္အခ်ိန္အခါကို ျဖတ္သန္း ေနတဲ့ နီနီခင္ေဇာ္ရဲ့ ဗီဒီယိုေလးကို အခုလိုပဲ တစ္ဆင့္ ကူးယူ တင္ဆက္ ေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္။ ခ်စ္တဲ့စာဖတ္ ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း သၾကၤန္အခ်ိန္အခါေလး ကို အိမ္ထဲမွာ ေနရင္း ျဖတ္သန္း ေနၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည့္ ပါတယ္ေနာ္။
Previous post အလုပ်တွေရပ်နားထားလို့ သူ့ရဲ့ အားလပ်ချိန်လေးမှာ လိုချင်တဲ့ အရုပ်တွေလိုက်ဝယ်ရင်း ချစ်တဲ့ သူတွေဆီကလက်ဆောင်အများကြီးရခဲ့ လို့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်
Next post သင်္ကြန်ကာလသီချင်းလေးဖွင့်ပြီး စည်းချက်ညီညီလေးနဲ့ ဟာသလေးဖြစ်အောင်ကပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုချပြလာတဲ့ ရှင်မွေလနဲ့မေလသံစဉ်